မုန်းစကုို တုိုစေ၊ ချစ်စကုို ရှည်စေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The end of the Myanmar fairytale
ရိုဟင်ဂျာပြသနာနှင့် ဆက်စပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဘယ်ဆုနဲ့ မထိုက်တန်ကြောင်း လူသိရှင်ကြား စွပ်စွဲချက် ပေါ်ထွက်လာ »
မုန်းစကုို တုိုစေ၊ ချစ်စကုို ရှည်စေ
မုန်းစကုို တုိုစေ၊ ချစ်စကုို ရှည်စေ။
ဘယ်လူမျိုးနဲ့ ဘယ်လူမျိုးကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သာသနာနဲ့ ဘယ်သာသနာကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဘယ်အုပ်စုနဲ့ ဘယ်အုပ်စုကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဂုိုဏ်းနဲ့ ဘယ်ဂုိုဏ်းကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
လူမျိုးတစ်မျိုး၊ သာသနာတစ်ခုထဲမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကုန်ကုန်ပြောရရင် တောင်ရွာနဲ့ မြောက်ရွာကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
ဟုိုရပ်ကွက်နဲ့ ဒီရပ်ကွက်၊ ဟုိုလမ်းနဲ့ ဒီလမ်းကြားမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်
အဖုအထစ်လေးတွေ၊ ပဋိပက္ခလေးတွေ၊ အဆင်မပြောတာလေးတွေ အမြဲရှိပါတယ်။
အဆင်မပြေခဲ့တာတွေကုို သင်္ခန်းစာယူပါ။ အဆင်ပြေခဲ့တာတွေကို ဖေါ်ကျူးပါ။
ချစ်စကုို ရှည်စေ မုန်းစကုို တိုစေ။
Ko Ko Gyi Do U meant …We need to extend our love affair with Myanmar Military by reducing our hatred on those Generals and ex-Generals?
OR JUST meant to combine forces between Buddhists and Muslims to kick out military dictators?
BUT I don’t think it is easy for Rakhines to combine forces with Rohingyas to get seperate Rakhine Independent Country? (But they have done this in the history as the agreement signed by both parties was revealed on the FB.
Aung Tin We (people) have to live. ဆုိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားတစ်ခုရှိပါတယ် ဆရာဦးကုိုကုိုကြီး။ ဆရာပုိုသိပါတယ်။ လူတွေဟာ အသက်ရှင်ရမယ်။ အသက်ရှင်နိုင်ရေးအတွက် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက အတူယှဉ်တွဲနေရေးပါဘဲ။ မြန်မာပြည်မှာ သတ်ကြတယ်ဆုိုတာ ကမ္ဘာ့စံချိန်နဲ့ဆုို မနှိုင်းယှဉ်သာပါဘူး။ ဟူတူနဲ့ တူရ်ဆီ၊ ဗဟုိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ စသဖြင့်ဆုိုရင် လူမျိုးတစ်မျိုးက နောက်လူမျိုးတစ်မျိုးကုို တွေ့တာနဲ့သတ်ဘဲ။ ဒီလူတွေတောင် အတူနေဖုို့ မုန်းစကုို တုို၊ ချစ်စကုို ရှာကြံပြီး ရှည်ရပါတယ်။ တရားဥပဒေစုိုးမုိုးရေး Justic ဆိုတာ တစ်ပုိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Reconciliation ကုိုလည်း ခါးသီးတဲ့၊ နာကျင်တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ရပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျူးလွန်သူတွေ၊ လှုံ့ဆော်သူတွေက လက်တစ်ဆုပ်စာပါ။ အဲဒီလက်တစ်ဆုပ်စာရဲ့ ခြိမ်းချောက်မှုကြောင့် လူထုကြီးက Silent Majority ဖြစ်နေရတာ နေရာတုိုင်းမှာပါဘဲ။
This entry was posted on October 28, 2014 at 2:21 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.